Tsy ny vokatra namboarina ihany fa namboarina ihany koa Service-News-NingBo COFF Machines Co., ltd
Tsy ny vokatra namboarina ihany fa koa ny serivisy namboarina
300L rafitra fanamafisam-peo momba ny solika manakaiky ny famitana ho an'ny vahiny ao Austria
Ny fitokisan'ny mpanjifa dia ny fahefana hampiakatra ny COFF
Afaka mamaha olana isan-karazany amin'ny fitaovana fanaovana labiera amin'ny asa-tanana ny COFF
Fotoana: 2021-06-01 Comment: 3
Mpividy Australiana iray an'ny COFF no faly tamin'ny fomba fahandro labiera notendren'ny injenieran'ny COFF. Ny fomba fahandro dia mifototra amin'ny fahalalana sinoa nentim-paharazana sinoa, amin'ny fampiasana sakamalao sy sy daty mena hanampiana tsiro.
Ny COFF dia tsy afa-po amin'ny fanomezana tanky labiera avo lenta ihany na dia mbola zava-dehibe aza izany. Ankehitriny, arakaraka ny fepetra manokana takian'ny mpanjifa tsirairay, ny COFF dia manandrana mamaly ny filan'izy ireo amin'ny fomba hafa, amin'ny fampiasana ireo traikefa sy loharanon-karena nandritra ny taona maro.
Ho an'ny mpanjifa Japoney izay tsy manao'Raha mazava ny fomba fampifandraisana ireo fantsona sy fittings, ny injenieran'ny COFF dia nanao sary 3D amin'ny antsipiriany izay nanamarika ny fifandraisana rehetra misy marika. Na ny vedios fametrahana sasany aza dia raisina manokana hanehoana ny fomba. Miaraka amin'ny sary sy vedios, ny toeram-pialofana't nametraka fanontaniana momba ny fametrahana.
Mpanjifa any Thailandy hafa dia tompona labiera matihanina, manana ny fahalalany manokana momba ny fizotran'ny fitaovana sy ny labiera. Ny fitakiany dia tsy mitovy amin'ny mpanjifa hafa, fittings sy faritra tsy miankina amin'ny ankamaroany. COFF engieer dia niresaka tamim-paharetana tamin'ny antsipiriany rehetra ary koa nanantona ireo mpamatsy sasany ireo fanovana nohavaozina. Farany dia nahafa-po ny mpanjifa ny valiny.
Ny mpanjifa aostraliana dia manana labiera ary nilaza taminay izy fa misy mpitsidika aziatika hatrany mankao amin'ny trano fisotroany, ka te hanana karazana labiera karakarain'ny mpanjifany izy. Manoro hevitra karazana labiera iray izahay miaraka amin'ny datin'ny sakamalao sy mena, izay afaka mameno ny angovo tena ilaina, araka ny voalazan'ny fanafody sinoa.d ary mampitony ny hozatra. Iray amin'ny COFF'Ny injenieran'ny mpamokatra hatrizay dia manome ny fomba fahandro, mifototra amin'ny anaovan'ny mpanjifa ny andiany voalohany. Nilaza ilay mpanjifa fa nanampy labiera tsiambaratelo Atsinanana tao amin'ilay trano fisotroany ilay labiera.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny vokatra COFF, mifandraisa pls jessie@nbcoff.com
Next: 300L rafitra fanamafisam-peo momba ny solika manakaiky ny famitana ho an'ny vahiny ao Austria
Tsy ny vokatra namboarina ihany ...
300L rafitra fanamafisana solika ...
Ny fahatokisan'ny mpanjifa no ...